Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Jet2 iyalela iinqwelo-moya ezintsha ze-A15neo ezili-321
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Inqwelomoya entsha iyakucwangciswa izihlalo ezingama-232 kunye nekhabhathi yeAirspace enezikhanyiso ezintsha, iimveliso zokuhlala ezintsha kunye neepesenti ezingama-60 ezinkulu kwimigqomo engaphezulu yomthwalo wolondolozo lomntu.
I-odolo entsha ithatha i-odolo iyonke yiLeeds, e-United Kingdom, ngokusekelwe kwi-airline kwi-51 A321neos.
Ezi odolo zimbini zeenqwelomoya zibonisa ukwandiswa kweenqwelo moya zikaJet2.com kunye nokuhlaziya izicwangciso zayo.
Inqwelomoya entsha iyakucwangciswa ukuba ibeke izihlalo ezingama-232 kunye nekhabhathi yeAirspace enezibane ezintsha.
IJet2.com ibeke enye iodolo ye-15 A321neos kulandela eyayo yokuqala engama-36 ebekwe ngo-Agasti 2021. Ithatha iodolo iyonke yiLeeds, e-United Kingdom, kwi-airline esekwe kwi-51 A321neos. Ezi odolo zimbini zibonisa Jet2.comUkwandiswa kweenqanawa kunye nezicwangciso zokuhlaziya. Ukukhethwa kweinjini kuyakwenziwa kamva.
New Jet2.com Inqwelomoya iyakucwangciswa izihlalo ezingama-232 kunye nekhabhathi yeAirspace enezibane ezitsha, iimveliso zokuhlala ezintsha kunye neepesenti ezingama-60 ezinkulu kwimigqomo engaphezulu yomthwalo wolondolozo lomntu.
Intsapho ye-A320neo ifaka itekhnoloji yakutshanje, kubandakanya iinjini zokuvelisa ezintsha kunye neeSharklets, ukuhambisa isaphulelo seepesenti ezingama-20 ekusebenziseni amafutha kwisihlalo ngasinye. Ngoluhlu olongezelelekileyo ukuya kuthi ga kwi-500 yeemayile zemayile / ngeekhilomitha ezingama-900. okanye iitoni ezimbini zomthwalo owongezelelweyo, i-A321neo iya kuhambisa iJet2.com kunye nengeniso eyongezelelweyo enokubakho.
Ukuphela kuka-Agasti 2021, usapho lwe-A320neo luphumelele ngaphezulu kwe-7,500 yeeodolo eziqinileyo ezivela kubathengi abangaphezulu kwe-120 kwihlabathi liphela.
Jet2.com Inikwe umda, ekwabizwa ngokuba yiJet2, yinkampani yeenqwelo moya yaseBritane enexabiso eliphantsi yokubonelela ngeenqwelo moya ezicwangcisiweyo nezisemthethweni ezivela eUnited Kingdom. Ukusukela ngo-2019, yeyesithathu ngobukhulu e-airline ecwangcisiweyo e-UK, ngasemva kwe-EasyJet kunye neBritish Airways.
Usapho lweAirbus A320neo luphuhliso losapho lakwa-A320 lweenqwelomoya ezinqabileyo zomzimba eziqhutywa yiAirbus. Usapho lwe-A320neo lusekwe kwi-A319 yangaphambili, A320 kunye ne-A321, eyathiywa igama kwathiwa yi-A320ceo, ukulungiselela "ukhetho lwangoku lwenjini".